Ukuhamba kuphi ngoMeyi: izindawo ezi-10 ezihamba phambili emhlabeni jikelele | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | 18/05/2021 10:25 | Izindawo zokuvakasha, Iziqondiso
Sifuna ukukutshela kule ndatshana mayelana nokuthi ungahamba kuphi ngoMeyi: izindawo eziyishumi eziphezulu. Isizathu silula: intwasahlobo iletha isimo sezulu esihle, izinsuku zinde futhi amazinga okushisa aqala ukukhuphuka. Njengokungathi konke lokhu bekunganele, inkathi yemvula ayikahlali e-Asia kanti ubusika abukaveli eNingizimu Melika.
Konke lokhu kwenza ukuhamba ngoMeyi kungumbono omuhle. Ngaphezu kwalokho, amahhotela ngokuvamile ashibhile kunasehlobo futhi izindawo eziningi ziyagubha amaqembu inohlonze impela. Uma kukho konke lokhu ungeza ukuthi izindawo zabavakashi aziminyene kakhulu kunangoJulayi noma u-Agasti, unezizathu eziningi zokucabanga ukuthi ungahamba kuphi ngoMeyi. Sizokukhombisa izindawo eziyishumi ezinhle kakhulu ukukwenza.
1 Ukuya kuphi ngoMeyi: izindawo ezi-10 ezihamba phambili, ukusuka eningizimu yeSpain kuya emabhishi ePhilippines
1.1 EPrague, indawo yomculo ongaya kuyo ngoMeyi
1.2 I-Porto: ungahamba kuphi ngoMeyi uma ufuna okuhlukile
1.3 ENormandy, izwe lamawa amangalisayo
1.4 Seville, ukunethezeka okusondele kakhulu
1.5 INew York ihlale ukubheja okuhle
1.6 ICyprus, itshe eliyigugu eMedithera
1.7 La Palma, uhambo oluhlukile oluya eCanary Islands
1.8 IBantayan, ukuthula kwesiqhingi sasePhilippine
1.9 ICórdoba, ubuhle beCaliphal City
1.10 ICosta Rica, izwe lamapaki emvelo
Ukuya kuphi ngoMeyi: izindawo ezi-10 ezihamba phambili, ukusuka eningizimu yeSpain kuya emabhishi ePhilippines
Izindawo esizoziphakamisa kuwe zifaka phakathi izindawo ezinjengamaphupho, amabhishi angenakuqhathaniswa, izikhumbuzo eziningi nemikhosi yendabuko edume umhlaba wonke. Sizoqala uhambo lwethu lwezindawo esingaya kuzo ngoMeyi.
EPrague, indawo yomculo ongaya kuyo ngoMeyi
IPrague Castle neCathhedral
Inhlokodolobha yesifunda saseCzech se Bohemia Yisiza sokuqala esikweluleka ngaso. Njengokungathi ifa layo elikhulu kakhulu bekungeyona isizathu, kusukela maphakathi noMeyi kuya ekuqaleni kukaJuni ligubha leli Umkhosi Wamazwe Omhlaba Wentwasahlobo. Ama-orchestra amakhulu nabaqhubi bahlangana edolobheni ukwenza amakhonsathi angenakulibaleka.
Ngakho-ke, uma ungumthandi womculo, siphakamisa uhambo oluya ePrague ukuyojabulela lo mcimbi. Futhi, ngasendleleni, ungayeki ukuvakasha izifunda zeCastle neMala Strana, lapho uzobona khona izikhumbuzo ezinhle njengePrague Castle uqobo, i- ISt. Vitus Cathedral noma okuyigugu Charles ibhuloho. Futhi, ungakhohlwa ukuhamba Inkanyezi Mesto, idolobha lasendulo lapho uzothola khona i- IHholo Lasekhaya Elidala newashi laso elidumile lezinkanyezi.
I-Porto: ungahamba kuphi ngoMeyi uma ufuna okuhlukile
I-Porto, indawo enhle ongaya kuyo ngoMeyi
Mhlawumbe idolobha elihle kakhulu ePortugal Lisboa namabhishi amahle kakhulu ezweni akuyo I-algarve. Kodwa-ke, iPorto inokuningi ongakunika khona. Okokuqala, idolobha lakhona elidala limenyezelwe Amagugu Emhlaba ngokwakhiwa okufana nesonto lakhe elikhulu, isigodlo sayo seStock Exchange, isonto nombhoshongo waseClérigos noma amabhuloho alo amaningi emfuleni iDuero.
Kepha, ngaphezu kwalokho, ungajabulela amasimu anempilo we AmaRibeira, lapho bazokunikeza khona amakhekhe kakhilimu athandwayo newayini elaziwa kancane lasePort. Noma, uma ufuna ukwazi inqubo yokwenza okwakamuva, unama-winery amaningi ngakolunye uhlangothi lweDuero.
Ekugcineni, ungayeki ukuvakasha iminyuziyamu yedolobha lasePortugal. Sikweluleka ngokuthi Ephakathi, eseCasa del Infante, yangekhulu leshumi nantathu leminyaka; eyodwa ye Imoto kagesi, nezimoto zayo ezindala, kanye ne Soares do Reis Kuzwelonke, ekhombisa ingxenye enhle yomsebenzi womqophi oqamba igama layo, omunye wezidume kakhulu emlandweni wamaPutukezi.
ENormandy, izwe lamawa amangalisayo
Kutholakala enyakatho ye- EFrance, INormandy yinhle ngalesi sikhathi. Uma uyivakashela, uzothola amawa amangalisayo afana nalawa Étretat, kodwa futhi namabhishi asendle angayinaki i- Isiteshi sesiNgisi nakwezinye izindawo ezinhle kakhulu.
Ungabona futhi amadolobha omlando afana I-Ruan, lapho yashiswa khona UJoan wase-Arc futhi lokho kunamatshe esikhumbuzo afana neCathedral of Our Lady, itshe eliyigugu ngesitayela samaGothic; i-Abbey ehlaba umxhwele yaseSaint-Ouen neSonto LaseSaint-Maclou, izibonelo ezimbili ze-Gothic evuthayo, nesakhiwo esihle seHotel de Bourgtheroulde, esishintshela kwisitayela se-Renaissance.
Okunye ukuvakasha ongeke ukuphuthe eNormandy Le Havre, isikhungo sayo esinomlando Amagugu Emhlaba ngekhathedrali layo eliyingqayizivele le-Renaissance, umbhoshongo wezibani wesonto iSaint-Joseph nezinye izikhumbuzo.
Kepha ngaphezu kwakho konke, awukwazi ukushiya iNormandy ngaphandle kokuvakashela ifayela le- isiqhingi saseMont Saint-Michel, eshiya isimo sayo sangaphakathi lapho kuphuma igagasi futhi lapho kutholakala khona i-abbey ebabazekayo yeBenedictine yegama elifanayo, ehlanganisa izitayela zeCarolingian, Romanesque neGothic.
Seville, ukunethezeka okusondele kakhulu
Akudingeki nokuthi ushiye iSpain ukuze ukhethe ukuthi uzohamba kuphi ngoMeyi. Inhlokodolobha yase-Andalusi yindawo enhle kakhulu ukujabulela intwasahlobo. ESeville unezikhumbuzo ezinhle ezifana nokubabazeka kwayo ICathhedral ngokungabekwa kwayo okuncane Giralda; the umbhoshongo weGolide noma i I-Alcazar yangempela, i-jewel ehlanganisa izitayela ze-Gothic neMudejar.
Okusimanje ngokwengeziwe, kepha okungahehi kangako yi ISpain Square, eyakhelwe i-Ibero-American Exposition yango-1929 futhi ehlaba umxhwele ngosayizi wayo nokuma kwayo. Futhi, ungakhohlwa ukuhamba ezindaweni zayo ezinhle njenge Triana noma lokho kwe Santa Cruz nakulokhu okuyigugu Ipaki kaMaria Luisa.
Kepha, ngaphezu kwalokho, iSeville inokunye okukhangayo ngalesi sikhathi. Ekuqaleni kukaMeyi odumile wakhe kahle, ngokukhanyisa kwendabuko nalapho ungajabulela khona iwayini nomculo wezwe.
INew York ihlale ukubheja okuhle
Siguqula amazwe kanye namazwekazi ukukumema ukuthi uvakashele eNew York, ukubheja kwezokuvakasha okungapheli. Noma yisiphi isikhathi yisikhathi esihle sokuya "edolobheni lamabhilidi amakhulu." Kuyo, ungaqala ukuvakasha kwakho kwe- Times Square, isikwele esidumile sezikrini ezinkulu. Ngemuva kwalokho ungavakashela izindawo zabo, ikakhulukazi Brooklin o Harlem, bese ngihamba Central Park noma ubone umbukiso ku Broadway.
Kepha ongakwazi ukuyeka ukukwenza ukubona ifayela le- Isifanekiso senkululeko, lo isiqhingi se-ellis, lapho izakhamizi ezivela kuwo wonke umhlaba zafika zifuna iphupho laseMelika futhi okuyisikhumbuzo sokuthuthela kwelinye izwe, kanye neminyuziyamu efana IMetropolitan yezobuciko, ingenye yezinhlobo ezinkulu kunazo zonke futhi ebaluleke kunazo zonke emhlabeni.
ICyprus, itshe eliyigugu eMedithera
Uhlamvu ohluke kakhulu kunalowo owedlule unendawo lapho sincoma khona manje. ICyprus iyinhlanganisela ephelele yamabhishi amahle kanye namathafa anefa lomlando elingaqhathaniswa. Mayelana neyokuqala, sincoma UNissi y Makronissos, lapho ungazijwayeza nokujuba nge-scuba.
Ngokuqondene namagugu, eCyprus uzothola izindlu zezindela ezingama-Orthodox ezinjengezo I-Saint Irakleidios nezigodlo zasendulo ezifana nalezi UKolossi, eyakhiwe ama-knights we-Order yaseSan Juan, eduze ne- iglesias njengalezo ze ITroodos massif, kwaziwa njenge Amagugu Emhlaba.
Ngakolunye uhlangothi, enhlokodolobha yezwe, Nicosia, unemnyuziyamu ekhangayo lapho ungabheka wonke umlando walesi siqhingi kusukela kuNeolithic kuye ezikhathini zase-Ottoman. Kepha ngaphambi kokuthi ubone ifayela le- udonga lwangenkathi ephakathi eyakhiwe amaVenetians, azungeze idolobha elidala elitholakala ngeminyango efana ne- Famagusta.
La Palma, uhambo oluhlukile oluya eCanary Islands
URoque de los Muchachos, eLa Palma
Ukuphendula umbuzo wokuthi ungahamba kuphi ngoMeyi, siphakamisa esinye isiqhingi esingezansi. Sizokutshela ngeLa Palma, enye yezindawo ezingaziwa kakhulu eCanary Islands, kodwa egcwele izindawo ezinhle kakhulu, amabhishi okuphupha kanye namadolobha ajwayelekile.
Waziwa ngokuthi "isiqhingi esihle", uma uyivakashela, ungajabulela izindawo ezinesihlabathi njengalezo Itheku laseNaos, Isidaka esiluhlaza okotshani o ILos Cancajos. Kepha futhi namahlathi aluhlaza aluhlaza nezintaba-mlilo ezibabazekayo njengalezo Benginomqondisi noma i I-Caldera de Taburiente, lapho kudaleke khona ipaki kazwelonke.
Okokugcina, ku USanta Cruz de la Palma, dolobha lesiqhingi, unezikhumbuzo ezifana amasonto aseSan Francisco naseSanto Domingo, amandla afana ne- Santa Catalina Inqaba nezithabathaba ezinesizotha njengaye Isigodlo Sotomayor noma i Indlu enkulu kaSalazar.
IBantayan, ukuthula kwesiqhingi sasePhilippine
ISugar Beach, eBantayan
I-Asia ihlala iyindlela ethokozisayo yokuhlala iholide elihle, amazwe avakashelwa kakhulu kuleli zwekazi Banekhaya lezindawo ezinhle, kepha uma uqinisekile ukuthi indawo oya kuyo ngoMeyi kufanele ibe nolwandle, cabanga ukubalekela esiqhingini sasePhilippines iBantayan. Phakathi kwamabhishi alo amaphupho, sincoma lokho kwe Kota, ngolimi lwaso lwesihlabathi; Ushukela; lokho kwe IPharadesi noma okumangele nakakhulu ongakuthola ku- isiqhingi se-virgin, ongafika kuyo ngokuqasha esinye sezikebhe ezincane zasendaweni, esibizwa bangka.
Awunakho okunye okunye ongakwenza eBantayan. Ngaphandle kwezindawo ezinesihlabathi esishiwo ngenhla, ungahamba ngezindlela ze- Omagieca Obo-Ob Mangrove Ecopark, isikhala semvelo semihlume emikhulu. Kunoma ikuphi, ngaphakathi kwezindawo ongazihambela ngoMeyi, lokhu kungenye yalabo abanakho amabhishi angcono nokuthula okwengeziwe.
ICórdoba, ubuhle beCaliphal City
Kuhlala kuyisikhathi esihle sokuvakashela idolobha lase-Andalusian iCórdoba. Hhayi ize, ingenye yalabo abanezikhumbuzo ezikhulunywe kakhulu Amagugu Omhlaba emhlabeni jikelele. Cishe okungadingekile ukuthi sikutshele ngokumangazayo kwaso Mokuncane, njengamanje iCathedral of the Assumption of Our Lady; yefa layo lamaRoma; yekota yakudala yamaJuda lapho ungavakashela khona i- Indlu yaseSepharad futhi i esinagogeni; kwe ukugeza kwe-caliphal noma ukuphoqelelwa Alcazar wamakhosi angamaKristu.
Ngokufanayo, ngaphandle kwedolobha unenkinga ye- UMedina Azahara, esinye seziqongo, esiseduze ne-Alhambra eGranada, yezakhiwo zamaSulumane eSpain. Kepha ngukuthi, ngaphezu kwalokho, phakathi nenyanga kaMeyi uCórdoba ugubha usuku lwayo Iqembu lamaPatios, kumenyezelwe Amagugu Angaphatheki Obuntu, kanye ne- UMay Crosses Festival.
ICosta Rica, izwe lamapaki emvelo
Irazú Volcano, eCosta Rica
Silushintshe ngokuphelele uhlobo lwendawo esiya kuyo ukuze siqedele uhlu lwethu lokuthi singahamba kuphi ngoMeyi. ICosta Rica ivelela ubumnandi bayo. Unobufakazi obuhle balokhu kufayela lakho le- inethiwekhi yepaki kazwelonke, ezinye zinezintaba kanti ezinye ziphakathi nethafa elisogwini.
Mayelana nokwedlule, sikukwazisa ukuthi ubone lena evela e-volcano yase-Arenal o owase-Irazú, kuyilapho, ngokuqondene nemizuzwana, kunjalo amaCahuita, nezixhobo zalo zamakhorali namahlathi asezindaweni ezishisayo anomswakama; lena evela kwaBarra Honda, nemihume yayo, noma EzikaCarara, ngezihlahla zayo zomdabu.
Lesi sakamuva singamakhilomitha ayikhulu ukusuka San José, inhlokodolobha yezwe. Kuyo, ungabona futhi izakhiwo ezinhle ze-neoclassical ezifana ne- Inqaba yaseMoor, iPosi neTelegraph noma lokho kwe Inkundla yaseshashalazini kaZwelonkekanye ne Metropolitan Cathedral namasonto ase umusa, of isizungu futhi i Carmen. Uma ufuna ukwazi ezinye izindawo eCosta Rica, sikukhuthaza ukuthi funda lesi sihloko.
Ekuphetheni, uma ubuzibuza ukuthi ungahamba kuphi ngoMeyi, sikukhombisile izindawo eziyishumi ezisenkazimulweni yazo enkulu ngaleso sikhathi. Manje ukukhetha kukuwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindawo zokuvakasha » Ungaya kuphi ngoMeyi: izindawo ezi-10 ezihamba phambili
Imvunulo ejwayelekile kaJalisco